Isikali Esincane se-Ultrasonic Circulation System Factory - Abenzi nabahlinzeki baseChina Isikali Esincane
Isihlanganisi sokuhlakazeka se-Ultrasonic
Izicelo ezixutshiwe ikakhulukazi zifaka ukuhlakazwa, i-homogenization, i-emulsification, njll. Ama-mixer e-Ultrasonic asetshenziselwa ukuxubana kwezicelo abonakala kakhulu ngokufakwa kokuqina ukulungiselela ukusabalalisa okufanayo, ukwehliswa kwezinhlayiya ukunciphisa usayizi, njll. UKUCHAZWA: IMODELI JH-BL5 JH-BL5L JH-BL10 JH-BL10L JH-BL20 JH -BL20L Imvamisa 20Khz 20Khz 20Khz Powe ...
Imishini yokuxuba uketshezi lwe-Ultrasonic
Ukuxutshwa kwempuphu kube uketshezi kuyisinyathelo esivamile ekwakhiweni kwemikhiqizo ehlukahlukene, njengopende, uyinki, imoto, iziphuzo, noma imithombo yezindaba epholisha. Izinhlayiya ngazinye zibanjwa ndawonye ngamandla okuheha ezinhlobonhlobo zomzimba nezamakhemikhali, kufaka phakathi amabutho e-van der Waals kanye nokungezwani kobuso bamanzi. Lo mphumela unamandla oketshezi oluphezulu lwe-viscosity, njengama-polymers noma izinhlaka. Amandla okuheha kufanele anqotshwe ukuze kusetshenziswe i-degglomerate futhi kuhlakazeke izinhlayiya zibe li ...
3000W imishini yokusabalalisa i-ultrasonic
Lolu hlelo lwenzelwe ukucubungula uketshezi oluncane lwe-viscosity, njengamafutha e-CBD, i-carbon black, i-carbon nanotubes, i-graphene, ukumbozwa, izinto ezintsha zamandla, i-alumina, i-nanoemulsions processing.
Imishini yokusabalalisa ye-20Khz ye-ultrasonic
Ubuchwepheshe bokusabalalisa kwe-Ultrasonic bunqoba izinkinga zokusabalalisa kwendabuko ukuthi izinhlayiya zokuhlakazeka azilungile ngokwanele, uketshezi lokusabalalisa aluzinzile, futhi kulula ukululahla.
Iprosesa yokusabalalisa ye-Ultrasonic yama-nanoparticles
Eminyakeni yamuva nje, ama-nanomaterials asetshenziswe kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene ukwenza ngcono ukusebenza kwezinto. Isibonelo, ukufaka i-graphene kubhethri le-lithium kungakhulisa kakhulu impilo yesevisi yebhethri, futhi ukwengeza i-silicon oxide engilazini kungakhulisa ukubonakala nokuqina kwengilazi. Ukuze uthole ama-nanoparticles amahle kakhulu, indlela ephumelelayo iyadingeka.Ultrasonic cavitation ngokushesha yakha izindawo ezingenakubalwa ezinengcindezi ephezulu nezincane ezinesixazululo. Lezi h ...